သင့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့်အဘိုးအဘွားတွေအတွက်ရည်ညွှန်းရန်အတွက်စာပိုဒ်တို ၁၀ ခု | ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ
အဘိုးအဘွားတွေကငါတို့မွေးလာတဲ့အချိန်မှာသက်ကြီးရွယ်အိုတွေဖြစ်ကြပေမယ့်ငါတို့ဘ ၀ ရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလို့ဆိုကြတယ်။ သူ၏တည်ရှိမှုသည်အကန့်အသတ်ရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့မမှတ်မိပါ။ သူတို့ဘက်မှသူတို့သုံးဖြုန်းခဲ့သည့်စက္ကန့်တိုင်းကိုသူ၏ဘဝအသက်တာ၏ဉာဏ်ပညာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ကြားပေးသည်ကိုသဘောပေါက်ရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့် သင့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့်အဘိုးအဘွားတွေကိုရည်စူးဖို့စကားစုအချို့ကိုပြချင်ပါတယ်။
အဘိုးအဘွားတွေကသူတို့ရဲ့မြေးတွေအတွက်ကောင်းကျိုးတွေဆောင်ကြဉ်းပေးတယ်၊ သူတို့ဟာမွေးကတည်းကကလေးတွေရဲ့ဘဝမှာဖြစ်သင့်တဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေဖြစ်တယ်။ မိုthe်းကောင်းကင်၌ကြယ်ကဲ့သို့၎င်း၊ သူ၏မရှိခြင်းအတွက်နာကျင်မှုနှင့် ၀ မ်းနည်းခြင်းသည်အလွန်နက်ရှိုင်းသည်။
ထို့ကြောင့်မိသားစုနျူကလိယအတွင်း၎င်း၏အရေးပါမှုနှင့်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ofကိုသိရှိရန်လိုအပ်သည်။ အဘိုးအဘွားများနှင့်မြေးများအကြားဖန်တီးထားသောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောင်ကြိုးသည်မိသားစုဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်နေသရွေ့အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာတွင်အဘိုးအဘွားများထားရှိခြင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုလူသားများဖြစ်လာစေရန်ကူညီပေးသည်။ ယနေ့တွင်သူတို့၏ကလေးများအလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရှုပ်ထွေးသောအစီအစဉ်များရှိသောကြောင့်သူတို့၏မြေးများကိုဂရုစိုက်သောအဘိုးအဘွားများရှိသည်။ အခြားသူများကအကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်သူတို့၏မြေးများကိုဂရုမစိုက်နိုင်သော်လည်းသူတို့အမြဲရှိနေသည်။ အခြားသူများရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စုပ္ပန်မဖြစ်နိုင်ပါ အကွာအဝေးကြောင့်ဒါပေမယ့်သူတို့ကအမြဲတမ်းနှလုံးကနေဖြစ်ကြသည်။
အဘိုးအဘွားများသည်သင့်ကလေးများ၊ သင်၏မြေးများ၏မိဘများအတွက်အကောင်းဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသောအထောက်အပံ့ဖြစ်သည်။ သူ၏ဘဝအတွေ့အကြုံ၌သူ၏အသံသည်အရွယ်ရောက်သူဖြစ်သော်လည်းဘဝတွင်ဆက်လက်လေ့လာနေဆဲဖြစ်သောအခြေအနေများစွာတွင်သူ၏ကလေးများကိုကူညီသည်။ သူတို့သည်မိမိတို့၏ကလေးများအပေါ်စာနာမှုရှိစွာဖြင့်သူတို့၏မိဘများ၊ သားသမီးများ၏အဘိုးအဘွားများသည်အကောင်းဆုံးဖျန်ဖြေသူများဖြစ်ကြောင်းအမြဲတမ်းနားလည်သဘောပေါက်လာသည်။ မည်သည့်မိသားစုပconflictိပက္ခသို့မဟုတ်အကြပ်အတည်းသည်။ ပညာတော်သည်ရွှေဖြစ်၏။
သို့သော်မိဘများအပြင်၎င်းတို့သည်မြေးများအတွက်လည်းအရေးကြီးသည်။ လောကသို့လာပြီးအဘိုးအဘွားများကိုပြန်လည်နုပျိုစေသောအပြစ်မဲ့သတ္တဝါများသည်၎င်းတို့အားဘဝနှင့်သူတို့၏တည်ရှိမှုကိုပြန်လည်အဓိပ္ပာယ်ရှိစေသည်။ အနည်းငယ်တင်းကျပ်သောမိဘများဖြစ်သောအဘိုးအဘွားများ၊ အခုသူတို့ဟာခွင့်ပြုတတ်တဲ့အဘိုးအဘွားတွေပါ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အခန်းကဏ္educကပညာမရှိတော့ဘူး၊ မဟုတ်ရင်လမ်းညွှန်ဖို့ပဲ။ ဘာလို့မပြောနိုင်တာလဲ။ အခြိနျမှနျမှလုပျဆောငျလြှငျ, ဒါအဆင်ပြေ!
သူတို့မြေးများနှင့်အတူအချိန်ဖြုန်းခြင်းသည်ပျော်မွေ့ရန်အချိန်ကာလတစ်ခုဖြစ်ရန်အလွန်အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာကလေးများသည်၎င်းတို့အားပေးသောအကောင်းဆုံးဘဝဗီတာမင်များနှင့်တူသည်။ အဘိုးအဘွားများတွင်ကလေးများအစာစားခြင်း၊ အိပ်ခြင်းနှင့်အသက်ရှူခြင်းစသည့်အရာများ - အချိန်နှင့်ဂရုစိုက်မှုရှိသည်။ သူတို့ကသင့်အားများများပေးနိုင်ပါသည်။
ကလေးများသည်ခြွင်းချက်မရှိသူတို့ကိုချစ်သောသူ၊ သူတို့စကားကိုနားထောင်ပြီးလိုအပ်သည့်အခါတိုင်းထောက်ပံ့ပေးသောအဘိုးအဘွားများနှင့် ပတ်သတ်၍ ပျော်ရွှင်ကြသည်။ ထို့အပြင်သူတို့သည်ဘဝတွင်သူတို့ကိုလမ်းညွှန်ပြီးခြွင်းချက်မရှိသောချစ်ခြင်း၊ ဆိုထားပါသည် သို့မဟုတ် စာနာမှု.
စင်စစ်အားဖြင့်သူတို့သည်ကလေးဘဝတွင်ရောသူတို့နေထိုင်ရာဘဝအဆင့်ဆင့်တွင်ပါအရေးကြီးသည်။ သူမအဘိုးအဘွားများပျော်မွေ့ရန်အတွက်ကံကောင်းထောက်မစွာပေးခဲ့သောအရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ် ဦး သည်လူမှုရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များပိုမိုကောင်းမွန်လာလိမ့်မည်။ သငျသညျလူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဘဝကိုယ်နှိုက်ပိုမိုကောင်းမွန်အဆင်ပြေအောင်အရွယ်ရောက်ပြီးသူနှင့်တူခံစားရပါလိမ့်မယ်။ သူတို့တည်ရှိမှုများအတွက်လိုအပ်သောတန်ဖိုးများကြောင့်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်, သူတို့ကမိသားစုနျူကလိယအတွင်းအရေးပါသောအခန်းကဏ္ having ရှိခြင်းမှအကျိုးခံစားရတယ်။ သူတို့ဟာအသုံးဝင်တယ်လို့ခံစားရတယ် မိသားစုဘဝအတွင်းတန်ဖိုးထားခံရပြီး၎င်းတို့၏အချိန်သည်၎င်းတို့ရွေးချယ်သောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပြန်လည်သက်ဆိုင်သည်။ သေချာတာပေါ့၊ မြေးတွေနဲ့အချိန်ကသူတို့အတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုခုမဟုတ်ရင်သူတို့အတွက်စည်းကြပ်မပေးသင့်ဘူး။
သူတို့၏မြေးများ၏ဘ ၀ တွင်တက်ကြွစွာပါဝင်နေသည့်အဘိုးအဘွားများသည်နေ့စဉ်နှင့်နီးကပ်စွာအဆက်အသွယ်မလုပ်နိုင်သူများထက်ပိုကောင်းသောမိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုရှိသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မိသားစုကိုထိခိုက်စေနှောင်ကြိုးအားဖြည့်နှင့် ၎င်းသည်လူတိုင်း၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုအတွက်အရေးကြီးသည်။ ဆက်ဆံရေးကိုထိန်းသိမ်းထားသရွေ့အဖွဲ့ဝင်အားလုံးအကြားလေးစားမှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။
ဒါတွေအားလုံးအတွက်၊ သူတို့ဘ ၀ မှာဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်၊ မင်းတို့သူတို့ကိုအထူးရည်ညွှန်းဖို့စကားစုအချို့ပေးချင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကအထူးဖြစ်ပြီးသူတို့ကချစ်ခင်ကြင်နာမှုနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုခံထိုက်တယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့ဘဝတွေဟာကလေးတွေနဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ၊ ကလေးတွေနဲ့မြေးတွေအတွက်ရည်စူးထားလို့ပဲ။ ဤလှပသောစကားများကဲ့သို့သူတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှရိုသေလေးစားမှုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သောကောင်းသည့်အရာအားလုံးထိုက်သည်မှာသေချာသည်။
ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်သည်၊ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ခေတ်မီသောအဘိုးအဘွားများဖြစ်လျှင်၊ ၎င်းတို့ကိုစာရွက်ပေါ်တွင်ဖြစ်စေ၊ သင်လိုချင်သည့်အရာအားလုံးတွင်ဖြစ်စေရေးထားနိုင်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာ၎င်းတို့သင်သင်အပ်နှံသောဤစကားများသည်သင်၏နှလုံးသားမှလာသည်ကိုသူတို့သိမြင်ခြင်းဖြစ်သည်။
“ ငါတို့ရဲ့ဘဝမှာအဘိုးထက်ပိုပြီးလှပတဲ့အရာမရှိဘူး။ သူ့မှာဖခင်၊ ဆရာတစ်ယောက်နဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။
“ အခုကျွန်တော်ကြီးပြင်းလာတာနဲ့အမျှသူငယ်ချင်းကောင်းရှိခြင်းဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကိုပိုပြီးသတိပြုမိလာတယ်။ ထိုအခါငါကအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေသင်, အဘိုးကြောင်းကိုနားလည်သဘောပေါက် "။
“ အဖိုး၊ အချစ်ဆိုတာမျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက်လက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်တဲ့အကြီးမြတ်ဆုံးလက်ဆောင်ဆိုတာငါ့ကိုသင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ”
“ ကျွန်တော့်ရှေ့မှာကမ္ဘာပေါ်မှာအကောင်းဆုံးပညာပေးသူအမြဲရှိနေတာကံကောင်းတယ်။ အဖိုး၊ မင်းနဲ့အတူငါကိုယ်တိုင်စဉ်းစားတတ်လာတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
“ အဘိုးအဘွားတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဘဝကအမြဲတမ်းမလွယ်ကူဘူးဆိုတာသင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်အမြဲတမ်းခေါင်းကိုက်နေပြီးအရာရာတိုင်းကိုသူတို့ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါရင်ဆိုင်ရမှာပါ”
"အဘိုးတစ် ဦး ကသူ့ဆံပင်တွေမှာငွေရှိပြီးနှလုံးထဲမှာရွှေရှိတယ်။ "
"ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အဆုံးမှာငါအလင်းရောင်မမြင်ရတဲ့အချိန်တိုင်း၊ သင်အဘိုးလိုတယ်၊ သင့်တော်တဲ့အချိန်၊ အကောင်းဆုံးအချိန်မှာငါ့ကိုလိုအပ်တဲ့အခါကူညီပေးဖို့ပဲ။ "
အကယ်၍ မင်းကအဘိုးအဘွားတွေအနားမှာရှိနေတာကံကောင်းမယ်ဆိုရင်သူတို့ကိုပျော်ရွှင်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အချိန်ကသင်ရနိုင်သမျှအကောင်းဆုံးလက်ဆောင်ပဲ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကိုယ်ပိုင်အကူအညီအရင်းအမြစ်များ » နည်းလမ်း » စာပိုဒ်တိုများ » သင့်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့်အဘိုးအဘွားတွေအတွက်ရည်ညွှန်းဖို့အတွက်စကားစု ၁၀ ခု